जापानी वैज्ञानिकको निष्कर्षः मानिसको छालामा ९ घण्टासम्म जिउँदै रहनसक्छ कोरोना
टोक्यो, २१ असोज । जापानका वैज्ञानिकहरुले मानिसको छालामा ९ घण्टासम्म कोरोना भाइरस जिउँदो रहने तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले बाहिर गएर घर पस्दा हातमा अनिवार्य स्यानिटाइजर लगाउने वा २० सेकेन्डसम्म साबुनपानीले हात धुन सुझाव दिएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले एक अनुसन्धानको क्रममा प्रयोगशालाबाटै सावित गरेका छन् कि मानिसको छालामा ९ घण्टासम्म कोरोना भाइरस जीवितै रहनसक्छ । इन्फ्लुएन्जा-ए को तुलनामा कोरोनाभाइरस ४ गुणा लामो समयसम्म जिउँदो रहनसक्छ । यस्तो दावी जापानको क्योटो प्रिफेक्चरल युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनमा गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्षमा गरिएको हो ।
कोरोना भाइरस यति लामो समयसम्म मानिसको छालामा कसरी जिउँदै रहनसक्छ भन्नेबारे पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन । अनुसन्धानका अनुसार छालामा भाइरस यति समयका लागि रहनु खतराको संकेत हो ।
अनुसन्धानका लागि फरेन्सिक अटाप्सीको माध्यमबाट मानिसको छालाको नमूना लिइएको थियो । छालाका कोशिकाहरुमा कोरोना भाइरस र इन्फ्लुएन्जा-ए को नमूनालाई मिसाइयो । अनुसन्धानबाट थाहा भयो कि छालामा फ्लुको भाइरस १.८ घण्टासम्म ज्युँदै रह्यो भने कोरोना भाइरस भने ९ घण्टासम्म ज्यूँदै रह्यो ।
अनुसन्धानका अनुसार जब नमूनामा रेस्पिरेट्री ट्याक्टबाट लिइएको म्यूकस राखियो तब कोरोना भाइरस ११ घण्टासम्म जिउँदै रहन सक्यो । यसमा हातमा लगाउने स्यानिटाइजर लगाउँदा १५ सेकेन्डभित्रै भाइरस नष्ट भयो । ह्याण्ड स्यानिटाइजर ८० प्रतिशत अल्कोहल भएको प्रयोग गरिएको थियो ।
यसकारण २० सेकेन्डसम्म हात धुनु जरुरी छ
सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनको गाइडलाइनअनुसार ६० देखि ९५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको स्यानिटाइजरबाट कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म हातमा लगाउँदा कोरोना नष्ट हुन्छ । साबुन पानीले हात धुन पनि सकिन्छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न जापानी वैज्ञानिकहरुका अनुसार इन्फ्लुएन्जा-ए भाइरसको तुलनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने खतरा पनि अधिक हुन्छ । यसर्थ, कोरोनाकालमा हातको सफाईमा ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ ।
कोरोना खोप ‘स्पूतनिक-भी’ पनि ९५ प्रतिशत प्रभावकारी र सबैभन्दा सस्तो
नोकिया ३.४ घोषणा, यस्ता छन् विशेषताहरु
टिम्समा अब एकैपटक एक हजार जना जोडिन मिल्‍ने फिचर ल्याउने तयारी
आणविक परीक्षणका कारण लाखौं अमेरिकी मृत्युको मुखमा पुगेका थिए
ह्वाट्सएपबाट दैनिक १ खर्ब म्यासेज पठाइन्छः मार्क जुकरबर्ग
एप डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ ? अब गुगलको नयाँ फिचर हेर्दै एपहरुको तुलना गर्नुहोस्
एएमडीले ३५ अर्ब डलरमा किन्यो झिलिङ्स
नासाले खोज्यो चन्द्रमाको सतहमा पानी, मानव बस्ती बसाउने वैज्ञानिक विश्वास थप बलियो
ह्वट्सएपले ल्यायो वेब भर्सनबाट कल गर्न सकिने सुविधा
कोभिड-१९ को उपचारमा अमेरिकामा रेम्डिसिभिरलाई पूर्णरुपमा स्वीकृति
एकाधिकार कायम गरेको भन्दै अमेरिकाद्वारा गुगुलमाथि मुद्दा दायर
हाम्रो नेपाली किबोर्डमा दशैं विशेष स्टिकर, कसरी गर्ने प्रयोग ?
युट्युबले हटाउँदैछ कोरोनाबारे भ्रम छर्ने भिडियो